Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mandrisika ny mpizahatany hody i Martinique
Ny fameperana ny fitsangatsanganana Martinique dia manentana ireo mpizahatany hody
Noho ny fiparitahan'ny COVID-19 coronavirus, ny Governemanta frantsay dia nametraka fepetra maromaro hifehezana sy hampihenana ny fiparitahan'ny Coronavirus amin'ny faritany rehetra ao anatin'izany ny fameperana ny dia nataon'i Martinique. Noho izany, ny Fahefana Martinique (CTM), ny Fahefana fizahan-tany Martinique, ny seranan'i Martinique, ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Martinique, ny masoivohom-paritry ny fahasalamana (ARS) miaraka amin'ny orinasa rehetra eo amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanoherana ny fiparitahan'ny ny viriosy miantoka ny fiarovana ny mponina ao an-toerana sy ny vahininy ankehitriny.
Na izany aza, amin'ity fisehoan-javatra tsy ampoizina ity dia nanoro hevitra mafy ny vahiny rehetra hiverina an-tanindrazana.
Ity ambany ity ny famintinana ireo fameperana napetraka tany Martinique:
Araka ny fameperana ataon'ny Governemanta frantsay dia tsy avelan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Martinique hiditra intsony (fialam-boly, fitsidihana fianakaviana sns ..) mankany amin'ny Nosy. Ary ho dingana iray hafa hampiatoana ny fiparitahan'ny COVID-19, ny sidina iraisam-pirenena rehetra mankany / avy any Martinique dia tapaka tamin'ny 23 martsa 2020.
Ny serivisy amin'ny serivisy dia hahazo alalana fotsiny amin'ny:
1) Ny fampitambatra indray ny fianakaviana misy zanaka na olona miankina aminy
2) Adidy matihanina tena ilaina amin'ny fitohizan'ny serivisy tena ilaina,
3) Fepetra ilaina amin'ny fahasalamana.
Ny fahaizan'ny fitaterana sidina avy any Martinique mankany Frantsa dia nahena ho telo mitovy amin'ny maridrefy 22 martsa. Ireo fitsipika ireo dia mihatra ihany koa eo amin'ireo nosy frantsay 5 ampitan-dranomasina: Saint-Martin, Saint-Barth, Guadeloupe, Guyana frantsay ary Martinique.
Ny Martinique Port Authority dia nanakana ny antso an-tsambo rehetra voalahatra ho an'ny vanim-potoana. Ny fangatahana fijanonana ara-teknika dia horaisina isaky ny tranga. Ny hetsika fitaterana kaontenera dia voatazona ihany koa, ary koa famenenana solika sy solika.
Noho ny fihenan'ny isan'ny fahaizan'ny mpandeha avelan'ny manampahefana frantsay; miato avokoa ny fitaterana an-dranomasina.
Ny hetsika rehetra any Marinas dia ajanona.
Noho ny famerana ny dia, ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny dia manakatona ny hetsika ataon'izy ireo, eo am-piandrasana ny fialan'ny vahininy farany. Tsy mahazo mahazo vahiny vaovao, ary mihidy ho an'ny besinimaro ny fampitaovana rehetra toy ny dobo, spa ary hetsika hafa.
Hetsika fialam-boly sy fisakafoanana
Noho ny quarantine napetraky ny Governemanta frantsay dia nikatona ho an'ny besinimaro ireo hetsika fialamboly, trano fisakafoanana sy fisotroana. Ny trano fisakafoanana ao anaty hotely misy vahiny ihany no mbola miasa mandrapahatongan'ny fialan'ny mpitsidika farany azy ireo.
Araka ny fameperana manan-kery dia mihidy ny orinasa rehetra ary tsy mandeha intsony ny fitateram-bahoaka. Natao manokana ny hetsika lehibe toy ny fivarotana lehibe, banky ary fivarotam-panafody.
Ny mponina rehetra dia manana adidy hijanona ao anaty tranomaizina mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny. Ho an'ny tanjona ilaina rehetra toy ny famatsiana ara-tsakafo, ny antony ara-pahadiovana na ny asa tena ilaina, dia takiana amin'ny antontan-taratasy fanalalahana izay azo alaina ao amin'ny tranonkalan'ny Prefecture of Martinique.
Raha mila vaovao farany sy vaovao misimisy momba ny COVID-19 sy ny fepetra napetraka tany Martinique dia tsidiho azafady ny Prefecture of Tranonkala Martinique.